Wararka - Waa maxay warqadda dahaarka leh ee PE?
Waraaq dahaarka leh ee PE.
2: Shaqada iyo codsiga
Marka la barbardhigo warqad caadi ah, waxay leedahay iska caabin biyo iyo saliid. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo kartoonnada cuntada,koobabka warqadaha, bacaha waraaqaha ah iyo baakadaha, iwm.
Waxa kale oo loo isticmaali karaa warqad warshadeed oo aan biyuhu lahayn. Waraaqda caadiga ah waxay ka kooban tahay fiber alwaax waxayna leedahay nuugid biyo xoog leh, sidaa darteed qof walba wuu ogyahay in warqaddu nuugto qoyaan oo ay ka cabsanayso qoyaanka. Caagga PE -ga ayaa si siman loogu dahaadhay dusha warqadda ka dib markii lagu dhalaaliyey mishiinka wax lagu duubo si loo sameeyo filim khafiif ah. Sababtoo ah waxay ku dhalaalaysaa dusha warqadda, way isku xidhan tahay oo way adkaanaysaa mana fududa in la kala gooyo, habka oo dhanna ma isticmaalo wax kiimiko ah. Soo -dareeraha ayaa aad bey'ada u fiican, mana loo baahdo wax koollo ah marka la shaqeynayo labaad ee xirmada ee marxaladda dambe. Filimka PE waxaa si toos ah loogu isticmaalaa in lagu shaabadeeyo dhalaalka kulul. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa baakadaha cuntada si looga hortago qoyaanka iyo saliidda. Jeebka waraaqaha la tuuro, bacaha waraaqaha hamburgerka, bacaha abuurka qaraha, sanduuqyada qadada warqadaha, bacaha waraaqaha cuntada, iyo bacaha qashinka duulista ee aan ku aragno nolol maalmeedkeena ayaa dhammaantood ka samaysan maaddadan. Warshadaha, waxaa inta badan loo adeegsadaa dahaarka qoyaanka iyo ka -hortagga biyaha. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo dusha qalabka dhismaha si looga hortago uumiga biyaha inuu soo galo gudaha guddiga.
Waraaqda dahaarka leh ee PE waxaa inta badan loo qaybiyaa: warqad caag ah oo PE-hal-caag ah leh iyo warqad dahaarka leh oo PE ah oo laba-caag ah
Inta badanna waan dooranaa Guddiga fool -maroodiga ee C1S ama warqad kraft ah oo lagu daboolo PE .Labaduba si weyn bay u isticmaalaan nolosheena caadiga ah.
5: Mashiinka dahaadhka (hal /labanlaab)
Waqtiga dhejinta: May-06-2021